ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေး - ဝီကီပီးဒီးယား
Chihiro, dressed in bathhouse work clothes is standing in front of an image containingagroup of pigs and the city behind her. Text below reveal the title and film credits, with the tagline to Chihiro's right.
၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၁; ၂၀ နှစ် အကြာက (၂၀၀၁-၀၇-20)
US$၃၅၂.၃ million (worldwide)
ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေး (Spirited Away (千と千尋の神隠し, Sen to Chihiro no Kamikakushi?, 'Sen and Chihiro’s Spiriting Away') သည် ဟယအို မိယဇခိ (Hayao Miyazaki) က ရေးသား၊ ရိုက်ကူးသော၂၀၀၁ ခုနှစ် ဂျပန် အန်နီမေးရှင်း စိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင် ဖြစ်သည်။ တိုခမ ရှောတင်း၊ နိပွန် တယ်လီဗေးရှင်းနက်ဝပ်၊ ဒဲင်းတျူး၊ ဘုအဲန ဗွီစတာဟုမ်း အင်တာတိန်းမန့်တို့အတွက် စတူဒီယို ဂစ်ဘလီ (Studio Ghibli) က ကာတွန်းအရှင် ရေးဆွဲသည်။ ရုပ်ရှင်ထဲတွင်၊ ရူမိ ဟီးရငိ၊ မိယု အိရီနို၊ မာရိ နတျုကိ၊ တကဲရှိ နိုင်းတို၊ ယစုကို စာဝငုချိ၊ တျုနဲဟိကို ကမိဂျော၊ တကဲဟိကို အိုနို နှင့် ဘွန်းတ စုငဝါရ တို့ ပါဝင်သည်။ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေးသည် အိမ်သစ် ပြောင်းရွှေ့နေစဉ်၊ မမျှော်လင့်ဘဲ ခမိလောက (Kami, ဂျပန်ရှင်တိုဘာသာ ရိုးရာပုံပြင်ထဲမှ နတ်ဝိဉာဉ်များ) သို့ ဝင်ရောက်မိသွားသူ ၁၀ နှစ်သား ကလေးမလေး ချိဟိရို အိုငိနို အကြောင်းကို ပုံဖော်ထားသည်။ သူမ၏ မိဘနှစ်ပါးသည် စုန်းမကြီး ယုဘာဘာကြောင့် ဝက်များအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်၊ ချိဟိရိုသည် ယုဘာဘာပိုင်သော ရေချိုးရုံတွင် အလုပ် ရှာဖွေ လုပ်ကိုင်ရကာ၊ သူမကိုယ် သူမနှင့် မိဘနှစ်ပါးပါ လွတ်မြောက်ရန် နည်းလမ်းကိုလည်းကောင်း၊ လူ့လောကသို့ ပြန်လာရန် နည်းလမ်းကိုလည်းကောင်း ရှာဖွေရလေသည်။
သူ့အိမ်သို့ နွေရာသီရောက်တိုင်း လာလည်တတ်သော၊ ရုပ်ရှင်လက်ထောက်ထုတ်လုပ်သူလည်း ဖြစ်ထသော သူ့သူငယ်ချင်း ဆေးဂျိ အိုကုဒါ ၏ ၁၀ နှစ် သမီးအပေါ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်အိမ်ကို တည်လိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ကျပြီးနောက်၊ မိယဇခိသည် ဇာတ်ညွှန်း ရေးတော့သည်။ ထိုအချိန်က မိယဇကိမှာ ကိုယ်ပိုင် ပရောဂျက် နှစ်ခု လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပြီး၊ နှစ်ခုလုံး အပယ်ခံရသည်။ ဘတ်ဂျက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၉ သန်းဖြင့်၊ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေး၏ ထုတ်လုပ်မှုကို ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် စသည်။ မိယဇခိ၏ မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်၊ ပရိသတ်လည်း ဖြစ်သူ Pixar အန်နီမေတာ ဂျွန် လက်ဆစ်တာက ၎င်းရုပ်ရှင်၏ မြောက်အမေရိက ဖြန့်ချိရေးမူပိုင်ကို ဝယ်ယူရန် ဝေါလ်ဒစ္စနေထုတ်လုပ်ရေးကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ကာ၊ သူကမူ ရုပ်ရှင်ကို အင်္ဂလိပ်အသံထပ် မူ၏ စီမံရေး ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် တာဝန်ယူသည်။ ထို့နောက် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ကီးယာ့ဝိုက်၊ ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ဒေါ်နယ် ဝ. အားနက် တို့ကို လက်ဆစ်တာက ငှားရမ်းပြီး၊ ဇာတ်ညွှန်းခွဲသူ စင်ဒီနှင့် ဒေါ်နယ် ဟဝစ်တို့က ဇာတ်ကောင်များ၏ မူရင်း ဂျပန်စကား နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရှားမှုကို လိုက်ကာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဒိုင်ယာလော့များကို ပြန်ရေးသည်။
၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်၌ တိုဟိုဖြန့်ချိရေးက စတင်ရုံတင်လိုက်ရာ၊ ကမ္ဘာတဝန်း ဒေါ်လာ ၃၅၂ သန်း မြတ်စွန်းလျက်၊ ကောင်းလှပေသည်ဟု အများ ချီးကျူးခြင်းကို ခံရပြီး၊ ထုတ်လုပ်ခဲ့သမျှတွင် အကြီးကျယ်ဆုံး အန်နီမေးရှင်း ရုပ်ရှင်များထဲ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း မကြာခဏပင် ခံရသည်။ ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ၊ ၎င်းရုပ်ရှင်သည် ဂျပန်ရုပ်ရှင်ဇယားတွင် တိုက်တန်းနစ် (ထိုစဉ်က ကမ္ဘာတွင် ထိပ်ဆုံးက အမြတ်ရနေသော ကား) ကို ကျော်လွန်ကာ၊ ယန်း ၃၀.၈ ဘီလျံနှင့် ဂျပန်သမိုင်းတွင် အအောင်မြင်ဆုံးနှင့် အမြတ်အစွန်း အမြင့်ဆုံး ရုပ်ရှင် ဖြစ်လာသည်။ ၇၅ ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ၌၊ အကောင်းဆုံး အန်နီမဲအတွက် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိခဲ့၍၊ ၎င်းကာတွန်းရုပ်ရှင်သည် ပထမဦးဆုံးနှင့် (ယနေ့ထိ တခုတည်းသော) လက်ဖြင့်ဆွဲပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ မဟုတ်သော အန်နီမေးရှင်းကား ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၀၂ ဘာလင် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ရွှေဝက်ဝံဆု (Golden Bear) ကို သွေးစွန်းသော တနင်္ဂနွေ(Bloody Sunday) ရုပ်ရှင်နှင့် ပူးတွဲ ရရှိသည်။ ဗြိတိန်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ၏ “အသက် ၁၄ နှစ်ထိ ကလေးများအတွက် ထိပ်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကား ၅၀” စာရင်းတွင် အထူး ၁၀ စာရင်းဝင်သည်။ ၂၀၁၆ တွင် ဘီဘီစီက ကမ္ဘာတဝန်းမှ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးဆရာ ၁၇၇ ဦးကို ရွေးခိုင်းရာ၊ ၎င်းသည် ၂၁ ရာစု၏ စတုတ္ထမြောက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဟု မဲပေးခံရပြီး၊ စာရင်းတွင် တန်းအမြင့်ဆုံး ကာတွန်းရုပ်ရှင် ဖြစ်သွားသည်။ ၂၀၁၇ တွင်၊ ၂၁ ရာစု၏ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်စာရင်းတွင် နံပါတ်နှစ်အဖြစ် နယူးယောက်တိုင်းစ်က စာရင်းသွင်းခြင်းကို ခံရသည်။
၃.၂ ဂီတနှင့် အသံ
၃.၃ အင်္ဂလိပ်ပြန် ယူခြင်း
၄.၃ ရိုးရာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အနောက်တိုင်းဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ
၁၀ နှစ်သား ချိဟိရိုနှင့် မိဘနှစ်ပါး သူတို့၏ အိမ်သစ်သို့ ပြောင်းရန် ခရီးထွက်လာသည်။ လမ်းမှားပြီး၊ လှိုဏ်ခေါင်းတခု ရှေ့ ရောက်သွားသည်။ ကြည့်ရသည်မှာ စွန့်ပစ်ထားသော ကလေးကစားကွင်းနှင့် တူနေသဖြင့် ချိဟိရို ငြင်းဆန်ပုန်ကန်နေသော်လည်း၊ အဖေဖြစ်သူက ဝင်ရောက်စူးစမ်းသည်။ လူသူကင်းမဲ့သော စားသောက်ဆိုင် တဆိုင်တွင် စားစရာများ အလျှံအပယ် တည်ခင်းထားရာ ချိဟိရိုမိဘတို့ ချက်ချင်းပင် ဝင်စားသည်။ ချိဟိရိုတယောက်တည်း ဆက်ထွက်လာရာ၊ ထူးဆန်းလှသည့် ရေချိုးရုံသို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ ဟကု ခေါ်သော ကောင်လေး နှင့် တွေ့ရာ၊ သူမကို နေမဝင်ခင် မြစ်ကြမ်းပြင်ကို ဖြတ်ပြီး ပြန်ရန် သတိပေးသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ကျသွားနှင့်လေပြီ။ ချိဟိရိုမိဘ ဝက်ဘီလူးများ ဖြစ်သွားကြသည့်အပြင်၊ ရေတက်လာပြီး ချက်ချင်း ပြည့်သွားသော မြစ်ကို ဖြတ်ကူးရန် သူမလည်း မတတ်နိုင်တော့ချေ။ ချိဟိရိုကို ဟကုက တွေ့ရာ၊ ရေချိုးရုံက ဘွိုင်လာမောင်း ဖြစ်သော ကာမာဂျီထံ အလုပ်တခု တောင်းရန် အကြံပေးသည်။ ရေချိုးရုံ အလုပ်သမဖြစ်သော လင်းကို ကာမာဂျီက ချိဟိရိုကို ယုဘာဘာဆီ ပို့ပေးရန် ခိုင်းသည်။ ယုဘာဘာသည် ရေချိုးရုံကို ပိုင်သည့် စုန်းမ ဖြစ်သည်။ ယုဘာဘာက ချိဟိရိုကို ထွက်ပြေးအောင် ခြောက်လန့်သည်။ သို့သော်လည်း ပေကတ်နေသဖြင့် ကောင်မလေးကို အလုပ်လုပ်ရန် ငှားလိုက်သည်။ သူမနာမည် ချိဟိရိုမှမှ ဒုတိယ ခန်းဂျီးစာလုံးကို ယုဘာဘာက မောင်ပိုင်စီးလိုက်ပြီး၊ (ချိကနေ) စင်း ပြောင်းပေးလိုက်သည်။ နောက်တော့ ဟကုက သတိပေးသည်မှာ သူက သူ့နာမည်ကို မေ့သွားသကဲ့သို့ သူမလည်း သူမနာမည်ကို မေ့သွားပါက ဝိဉာဉ်လောကကနေ ထွက်နိုင်တော့မဟုတ်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
စင်းသည် ရေချိုးရုံတွင် အခြားသူများ ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံခြင်းကို ခံရသည်။ သူ့ကို ဟကုနှင့် လင်းတို့ကသာ စာနာသည်။ အလုပ်လုပ်ရာ၊ မျက်နှာမဲ့ဟု ခေါ်သော အသံတိတ် သတ္တဝါကြီးကို ဖောက်သည်ထင်ကာ အထဲ ဖိတ်သွင်းမိသည်။ စင်း၏ ဦးဆုံးဖောက်သည်အဖြစ် အနံ့ဆိုးဝိဉာဉ်ကောင် ရောက်လာရာ၊ ၎င်းသည် ညစ်ပတ်မြစ်၏ ဝိဉာဉ် ဖြစ်နေသည်။ သူ့ကို ရေချိုးသန့်စင်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့် စင်းကို မှော်အန်ဆေးလုံး ပေးသွားသည်။ ထိုစဉ် မျက်နှာမဲ့က အနံ့ဆိုးဝိဉာဉ်က ရွှေများ ထားခဲ့ဟန် တုပလိုက်ပြီး၊ ရွှေကောက်လိုက်သူတိုင်းကို ဝါးမြိုသည်။ အစာ အစာဟု တောင်းရင်း ပိုပိုကြီးထွားလာသည်။ စင်းနှင့် စကားပြောနေစဉ် ကြားဝင်သူ နှစ်ဦးကိုလည်း ထပ် မြိုလိုက်သည်။
စက္ကူမှင်စာ ဖြစ်သော ရှိခိငမိက ဂျပန်နဂါးကို တိုက်ခိုက်နေသည်ကို စင်း တွေ့ရာ၊ နဂါးကို ဟကုမှန်း သိသွားသည်။ ဟကု ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရပြီး၊ ယုဘာဘာ၏ လေသာဆောင်ထဲ လွင့်ကျသွားသည်။ စင်းက လှေကားထစ်ကနေ သူ့နောက် လိုက်လာသည်။ သူမနောက်ကျော၌ ခိုလိုက်လာသော ရှိခိငမိသည် ယုဘာဘာ၏ အမွှာညီမဖြစ်သော ဇဲနီဘာအဖြစ် ပုံပြောင်းလဲသွားသည်။ ဇဲနီဘာက ယုဘာဘာ၏ သားဖြစ်သော ဘိုးကို ကြွက်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ဇဲနီဘာက စင်းကို ပြောပြသည်မှာ ဟကုသည် သူမထံမှ မှော်ရွှေပြားတံဆိပ် ခိုးသွားကြောင်း၊ ယင်းတံဆိပ်သည် ကျိန်စာသင့်နေကြောင်း သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက် ဟကုက ဇဲနီဘာပုံပြောင်းထားသော ရှိခိငမိ စက္ကူမှင်စာကို ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ သူသည် ဘွိုင်လာခန်းထဲသို့ စင်း၊ ဘိုးနှင့်အတူ ကျသွားရာ၊ စင်းက သူ့ကို အန်ဆေးလုံး တစိတ် ကျွေးလိုက်သည့်အတွက် အန်ထုတ်ရာ၊ တံဆိပ်အပြင် ပက်ကျိမဲ တကောင်ပါ ထွက်လာသည်။ စင်းခြေထောက်ဖြင့် နင်းခြေလိုက်သည်။
ဟကု သတိမေ့နေစဉ်၊ စင်းသည် တံဆိပ်ပြားကို ဇဲနီဘာသို့ ပြန်အပ်ကာ တောင်းပန်ဖြေရှင်းလိုက်သည်။ ယခုအခါ ဧရာမကြီး ဖြစ်နေသော မျက်နှာမဲ့ကို စင်းသည် ရင်ဆိုင်ပြီး၊ အန်ဆေးလက်ကျန်ကို ကျွေးလိုက်သည်။ မျက်နှာမဲ့သည် ရေချိုးရုံပြင်သို့ စင်းနောက်ကို လိုက်လာသည့် လမ်းတလျှောက် သူစားခဲ့သမျှကို ပြန်အန်လေသည်။ စင်း၊ မျက်နှာမဲ့၊ ဘိုးနှင့် ဟာပီတို့ ဇဲနီဘာကို တွေ့ရန် ရထားဖြင့် ခရီးနှင်လာသည်။ ယုဘာဘာက စင်းမိဘများကို သတ်ရန် အမိန့်ပေးလိုက်သောအခါ၊ ဟကုက ဘိုးပျောက်နေသည်ကို ဖော်ထုတ်ပြီး၊ ပြန်ရလိုပါက စင်းနှင့် သူမမိဘကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဇဲနီဘာက ဟကုအပေါ် ထားသော စင်း၏ မေတ္တာက သူမ၏ ကျိန်စာကို ပြေပြယ်စေနိုင်ကြောင်း၊ ယုဘာဘာက ပက်ကျိမဲဖြင့် ဟကုကို စေစားကြောင်း ပြောပြလိုက်သည်။ ဟကုသည် ဇဲနီဘာအိမ်သို့ နဂါးကိုယ်ပုံဖြင့် ရောက်လာပြီး၊ စင်း၊ ဘိုး နှင့် ဟာပီတို့ကို တင်ဆောင်ကာ ရေချိုးရုံသို့ ပျံခေါ်လာသည်။ မျက်နှာမဲ့မှာ ဇဲနီဘာနှင့် ကျန်ရစ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ လေထဲ ပျံသန်းနေစဉ် ခရီးတဝက် အရောက်၊ စင်း လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း ကိုဟကုမြစ်ထဲ ကျသွားပြီး၊ လှိုင်းပုတ်၍ ကမ်းတင်လာသည်ကို ပြန်အမှတ်ရပြီး၊ ဟကု၏ ယခင်ဘဝသည် မြစ်ဝိဉာဉ် ဖြစ်ကြောင်း မှန်ကန်စွာ မှန်းဆနိုင်သွားသည်။
ရေချိုးအိမ်သို့ အားလုံး ရောက်ကြသည့်အခါ၊ ယုဘာဘာက စင်းကို ကျိန်စာပြယ်လိုပါက ဝက်အုပ်ထဲမှ မိမိမိဘကို မှန်ကန်အောင် ပြန်ရွေးရမည်ဟု ဖိအားပေးလေသည်။ စင်းက ဤဝက်များအားလုံး မိမိမိဘ မဟုတ်ဟု မှန်ကန်စွာ ဖြေကြားလိုက်ရာ၊ စုန်းမကြီးလည်း မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်တော့ဘဲလွတ်လပ်စွာ သွားခွင့် ပေးလိုက်ရသည်။ ဟကုသည် သူမကို ယခုအခါ ခြောက်သွေ့သွားလေသော မြစ်ကြမ်းပြင်သို့ ခေါ်လာပြီး သူမနှင့် ဆက်ဆက် ပြန်တွေ့ရန် သစ္စာပြုသည်။ ချိဟိရိုသည် မိဘနှင့်အတူ လှိုဏ်ခေါင်းကို ဖြတ်ပြီး ပြန်ရောက်လာရာ၊ မိဘများသည် စားသောက်ဆိုင်တွင် စားသောက်ပြီးနောက် ဖြစ်ပွားသမျှ အကြောင်းခြင်းရာ အဝဝကို လုံးဝ မမှတ်မိချေ။ သူတို့အားလုံး ကားထဲ ပြန်ရောက်ရာတွင်၊ ကားသည် ဖုန်သဲများ၊ သစ်ရွက်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေသည်ကို တွေ့သည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် အိမ်အသစ်ဆီသို့ ခရီးဆက်လက် ထွက်ခွာလာလေသည်။ ဤမျှသာ။
ချိဟိရို အိုငိနို / စင်း Ogino Chihiro (荻野 千尋) / Sen (千)[မှတ်စု ၁] ရူမီ ဟီးရငိ Daveigh Chase
ဟကု / ကိုဟကု မြစ်ဝိဉာဉ် Haku (ハク) / Nigihayami Kohakunushi (饒速水小白主)[မှတ်စု ၂] မိယု အီရိနို Jason Marsden
ယုဘာဘာ Yubāba (湯婆婆)[မှတ်စု ၃] မာရိ နတျုခိ Suzanne Pleshette
ဇဲနီဘာ Zenība (銭婆)[မှတ်စု ၄]
ကာမာဂျီ Kamajī (釜爺)[မှတ်စု ၅] ဘွန်းတ စုငဝါရး David Ogden Stiers
လင်း Rin (リン) ယောမိ တမအိYoomi Tamai Susan Egan
ဖခင် Chichiyaku (父役) တျုနဲဟိကို ကမိဂျော Paul Eiding
Aniyaku (assistant Manager) Aniyaku (兄役) Takehiko Ono John Ratzenberger
မျက်နှာမဲ့ No-Face[မှတ်စု ၆] Kaonashi (顔無し)[မှတ်စု ၇] အာကိအို နာခါမူရAkio Nakamura Bob Bergen
ဖားပြာ Aogaeru (青蛙)[မှတ်စု ၈] တတျုယ ဂရှူးအင်းTatsuya Gashūin
ဘန်းဒိုင်းဖား(ဖိုမင်) Bandai-gaeru (番台蛙)[မှတ်စု ၉] Yō Ōizumi Rodger Bumpass
ဘိုး (ကလေး) Bō (坊) Ryūnosuke Kamiki Tara Strong
အကိအို အိုငိနို (ချိဟိရို ဖခင်) Ogino Akio (荻野 明夫) Takashi Naitō Michael Chiklis
ယူးကို အိုငိနို (ချိဟိရို မိခင်) Ogino Yūko (荻野 悠子) Yasuko Sawaguchi Lauren Holly
မြစ်ဝိညာဉ် Kawa no Kami (河の神) Koba Hayashi Jim Ward
မုန်လာဥဝိဉာဉ် Oshira-sama (お白様)[မှတ်စု ၁၀] Ken Yasuda Jack Angel
“လူတွေက သနားကရုဏာသက်ကြမယ့် တယောက်ယောက်မျိုး၊ ရိုးရိုးဆယ်ကျော်သက် သူရဲကောင်းမလေးကို ကျွန်တော် ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါက ဇာတ်ကောင်တွေ ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ ဇာတ်လမ်း မဟုတ်ဘူး၊ အားလုံးရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ ရှိနေပြီးသား ဒါပေမဲ့ သီးခြား အခြေအနေအချိန်အခါ ကျလာမှ ပေါ်ထွက်လာတတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေ အဲလို ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ၊ အဲလို ကြိုးစားချင်စိတ်လေးတွေ ရှိကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။” (ဟယကို မိယဇခိ)
နွေရာသီတိုင်း၊ ဟယကို မိယဇခိသည် အားလပ်ရက်ကလေးကို တောင်ကုန်းပေါ်ရှိ သစ်လုံးအိမ်တွင် မိသားစုရယ်၊ သူ့သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော ကလေးမလေး ငါးယောက်ရယ်နဲ့ အတူ ကုန်ဆုံးသည်။ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေးကို ဖန်တီးရန် စိတ်ကူးသည် သူ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ရေးသားချင်စိတ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ မိယဇခိသည် ယခင်ကလည်း ကလေးသူငယ်၊ လူငယ်ပိုင်းအတွက် ငါ့အိမ်နီးချင်း တိုတိုရို (My neighbor Totoro) နှင့် ကိကိရဲ့ အမြန်ချောပို့ (KiKi’s Delivery Service) စသော ရုပ်ရှင်များကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးလေပြီ။ ယင်းသို့ ဖြစ်လင့်ကစား၊ ၁၀ နှစ်သား ကောင်မလေးများအတွက် ရုပ်ရှင်ကားကို မရိုက်ဖူးသေးချေ။ ထို့အတွက် အာရုံရရန်၊ ကလေးမလေးများ အိမ်တွင် ချန်ရစ်သော နာခယော်ရှိ နှင့် ရီဘွန်း ကဲ့သို့သော မြီးကောင်ပေါက်မ မဂ္ဂဇင်းများကို ဖတ်ကြည့်သည်။ သို့သော် ဖတ်ရသမျှမှာ ချစ်ခန်း ကြိုက်ခန်းအကြောင်းသာ အသားပေးနေသည်ဟု ခံစားရသည်။ ထိုအရာများသည် ထိုကလေးမလေးများ အူထဲသည်းထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လိုအပ်သော စိတ်ဆန္ဒများ မဟုတ်ကြောင်း မိယဇခိ တွေးမိကာ၊ သူတို့ ဖတ်ရှုနိုင်မည့် သူရဲကောင်းမလေး တယောက်အကြောင်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ကျသွားသတည်း။
ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေးကို ရိုက်ကူးရန် စိတ်သွင်းသည့်အနေနှင့် ရှောဂျော့ ကာတွန်း၌ အသုံးပြုသော ဒါရိုက်တာနှင့် စာရေးဆရာ ဟယအို မိယဇခိ
မိယဇခိ ရုပ်ရှင်သစ် တကား ထုတ်ချင်နေသည်မှာ နှစ်ကြာပြီ။ သို့သော်လည်း သူ့ ယခင် အဆိုပြုချက်နှစ်ခု၊ တခုက စချိကို ခရှိဝဘ ရေးသည့် ဂျပန်စာအုပ် မြူခိုးရဲ့ တဖက်က ထူးဆန်းတဲ့မြို့ (霧の向こうの不思議な町　Kiri no Muko no Fushigi na Machi) နှင့် နောက်တခုက လူငယ် သူရဲကောင်းမအကြောင်း၊ နှစ်ခုစလုံး အပယ်ခံရသည်။ တတိယအဆိုပြုချက် ဖြစ်သော စင်းနဲ့ ချိဟိရိုရဲ့ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေး ကျမှ ပို အောင်မြင်သွားသည်။ အဆိုပြုချက် သုံးခုစလုံးက မိယဇခိ မွေးရပ်မြို့က ရေချိုးအိမ်အကြောင်း စိတ်ကူးစိတ်သန်းချည်း အခြေတည်ထားသည်။ ရေချိုးအိမ်ကို ထူးခြားဆန်းကြယ်သော နေရာ ဟု သူထင်သည်။ ရေချိုးအိမ်တွင် ရေချိုးကန်နံဘေး၌ တံခါးပေါက် သေးသေးလေး ရှိသည်။ ထိုအပေါက်နောက်မှာ ဘာရှိသနည်းဟူသည်ကို မိယဇခိအမြဲ စပ်စုချင်မိသည်။ ထိုအရာနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး၊ ဇာတ်လမ်းများစွာ စိတ်ကူးလိုက်ရာမှ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေးဇာတ်အိမ်ကို စိတ်ကူးမိသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
အိုငတ ဂဲ့ကိုမှ လက်ရာထဲတွင် ဖူဂျီတောင် နောက်ခံနှင့် ဝေဟင်သို့ ပျံတက်နေဟန် ဂျပန်နဂါး။ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေးတွင် ဂျပန် ရှင်တိုဗုဒ္ဓဘာသာ ရိုးရာပုံပြင်များ၏ ရိုက်ခတ်မှု များစွာ ပါသည်။
ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေးကို ထုတ်လုပ်ရန် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဘတ်ဂျက် ယန်း ၁.၉ ဘီလျံ (ကန်ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း) ဖြင့် စကြသည်။ အမေရိကန် ဖြန့်ဖြူးရေး right of first refusal အရ ဒစ္စနေက ကုန်ကျစရိတ်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရင်းနှီးသည်။ မင်းသမီး မိုနိုနိုကဲ ကာတွန်းကားဖြင့် မိယဇခိနှင့် စတူဒီယို ဂစ်ဘလီမှ ဝန်ထမ်းများသည် ကွန်ပျူတာ အင်နီမေးရှင်းနှင့် ကျွမ်းဝင်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ Softimage 3D သို့သော ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များကို သုံးတတ်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း၊ ဇာတ်လမ်းကို ပုံပိုကြွအောင် နည်းပညာကို အထူးဂရုစိုက် အသုံးပြုသည်။ ဇာတ်ကောင် တကောင်စီကို အများအားဖြင့် လက်ဖြင့် ဆွဲပြီး၊ မိယဇခိကလည်း အင်နီမေတာ နံဘေးကနေ သူတို့ဆွဲတာ လိုက်ကြည့်ပြီး၊ မှားလျှင် ချက်ချင်း ပြင်သည်။ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရာ၌ အကြီးမားဆုံး အခက်အခဲမှာ ပေရှည်သည်ကို လျှော့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်ရေး စသည့်အခါ မိယဇခိ သဘောပေါက်သွားသည်က သူ့ဇာတ်ကွက်အတိုင်းသာ ထုတ်မည်ဆိုလျှင် သုံးနာရီမက ရှည်သွားလိမ့်မည်ဟု ဖြစ်သည်။ သို့နှင့် ဇာတ်လမ်းထဲက အခန်း အတော်များများကို ဖျက်ပစ်သည်။ မျက်စိထဲ ပြူးနေသည့် အရာများကို လျှော့ချသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရုပ်ရှင်ကို ရိုးရိုးစင်းစင်း ဖြစ်စေချင်၍ ဖြစ်သည်။ မိယဇခိက ဟီးရိုးကို ကောင်ချောမလေး မဖြစ်စေချင်ပေ။ အစပထမက စိတ်ပျက်ဖူးသည်။ ဇာတ်ကောင်က တုံးအနေပုံ ပေါက်နေသည်။ “ချစ်စရာလည်း မကောင်းဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ” ရုပ်ရှင် အဆုံးသတ်ပိုင်း ရောက်ကာနီးလာမှ၊ “ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မိန်းကလေး ဖြစ်လာမှာပါပဲ”ဟု သက်သာရာရသွားသည်။ ရုပ်ရှင်ကို အသက်ဝင်အောင် တယ်လီကွန်း အင်နီမေးရှင်းရုပ်ရှင်၊ အင်နီမဲ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ၊ အရူးအိမ်(Madhouse)၊ အိုင်ဂျီထုတ်လုပ်ရေး၊ အိုး(Oh!) ထုတ်လုပ်ရေး နှင့် ဒီအာမူဗွီး တို့က ကူညီသည်။
ဂျပန်၊ တိုကျို၊ ခိုဂနေးမှာ ရှိသည့် အစစ်အမှန် အဲဒိုခေတ်-တိုကျို အိုးပင်းအဲ ဗိသုကာပြတိုက်ထဲက အဆောက်အဦများကို မှီငြမ်းပြီး၊ ဝိဉာဉ်လောကထဲရှိ အဆောက်အဦများကို ရေးဆွဲသည်။ ရုပ်ရှင်အတွက် လုပ်နေစဉ်၊ ပြတိုက်သို့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းရရန် မကြာခဏ လာလည်သည်။ သူအမြဲ စိတ်ဝင်တစား ကြည့်သည်က ယခုလက်ရှိမှာလည်း မြင်နိုင်သော မေဂျီခေတ်မှ အနောက်တိုင်းဆန်သော အဆောက်အဦများ ဖြစ်သည်။ ပြတိုက်ရောက်လျှင် မိယဇခိအဖို့ လွမ်းနာကျသလို ဖြစ်သည်။ “ပြတိုက်ထဲမှာ ရပ်နေချိန်၊ နေဝင်ခါနီး တံခါးကလည်း ပိတ်တော့မယ် အချိန်မျိုးဆို မျက်လုံးထဲမှာ မျက်ရည်တွေ ပြည့်တက်လာတာပဲ” နောက် မောင်းနှင်အား တခုမှာ ယာမငတခရိုင်အတွင်း တည်ရှိသော ရိုးရာဂျပန်စားသောက်ဆိုင် ဖြစ်ပြီး၊ ထူးခြားသော ဗိသုကာ အခင်းအကျင်းများကြောင့် နာမည်ကျော်သည်။ အချို့ လမ်းညွှန်စာအုပ်များနှင့် ဆောင်းပါးများက ထိုင်ဝမ်ရှိ ကျိုဖိန်း ရွှေမြို့ဟောင်းသည် ရုပ်ရှင်အတွက် အခင်းအကျင်းကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ညွှန်းကြသော်လည်း မိယဇခိ လက်မခံ။ ဒိုးငေါ့ ရေပူစမ်းသည်လည်း ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေး ကာတွန်းရုပ်ရှင်ထဲမှ ရေချိုးရုံအတွက် အဓိက အခရာကျသော အရာဟုလည်း မကြာခဏ ပြောကြသည်။
နောက်ခံဂီတသည် ၅၆ ကြိမ်မြောက် မအိနိချိ ရုပ်ရှင်ယှဉ်ပြိုင်ရေးဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံးတေးဂီတဆုကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၁ တိုကျိုနိုင်ငံတကာ အင်နီမဲပြပွဲတွင် ရုပ်ရှင်ကဏ္ဍ၌အကောင်းဆုံးဂီတဆုကိုလည်းကောင်း၊ ၁၇ ကြိမ်မြောက် တနှစ်တာ အင်နီမေးရှင်းအယ်လဘမ်အတွက် ဂျပန် ရွှေဓာတ်ပြားဆုကိုလည်းကောင်း ရရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း “နွေနေ့တနေ့”(One Summer’s Day)ကို စာသား ပေါင်းထည့်ပြီး၊ ဗားရှင်းအသစ်ကို အိနိုချိ နော့ နာမအဲ (အသက်ရဲ့ အမည်နာမ)(The Name of Life)(いのちの名前　Inochi no Namae)ဟု မှည့်ကာ၊ အာယက ဟိရဟရက ဖျော်ဖြေသည်။
အပိတ်တေးသွား “အမြဲတမ်း ငါနဲ့အတူ” (Always with me)(いつも何度でも　Itsumo Nando Demo)(lit. ‘Always, No Matter How many Times’)ကို အိုဆာကာမှ သီချင်းရေးဆရာနှင့် Lyre-player ဖြစ်သည့် ယိုးမိ ခိမူရက ရေးသား ဖျောဖြေသည်။ ထိုသီချင်းသည် အမှန်မှာတော့ မိယဇခိ၏ အခြား ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော မီးခိုးခေါင်းတိုင်ဆေးသုတ်သူ ရင်း(Rin the Chimney Painter, 煙突描きのリン　Entotsu-kaki no Rin) အတွက် သုံးရန် ရည်စူးခဲ့ပြီး၊ ၎င်းရုပ်ရှင်မှာလည်း မထုတ်ဖြစ်ချေ။ အထူးထုတ်သော ဂျပန်ဒီဗွီဒီ၌၊ မိယဇခိက ထိုသီချင်းကမှ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေးကို ဖန်တီးရန် မည်သို့မည်ပုံ အာရုံရလာစေကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။ ၎င်းသီချင်းကိုယ်နှိုက်ကသည် ၄၃ ကြိမ်မြောက် ဂျပန်ဓာတ်ပြားဆုပေးပွဲတွင် ရွှေဆုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။
မူရင်းတေးသွားအပြင်၊ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေး ပုံရိပ်အယ်လဘမ် Spirited Away Image Album (Sen to Chihiro no Kamikakushi Imeji Arubamu) အမည်ပေးထားသော ဓာတ်ပုံအယ်လဘမ်လည်း ရှိကာ၊ တေးသွား ၁၀ ပုဒ်ပါသည်။
Pixar အဲနီမေတာလည်းဖြစ်၊ မိယဇခိပရိသတ်လည်း ဖြစ်သော ဂျွန်လက်ဆစ်တာသည် ဇာတ်လမ်းဖန်တီးနေစဉ်က၊ မိယဇခိ လက်ရာကို ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူ ထိုင်ကြည့်နေသူ ဖြစ်သည်။ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေးကို ကြည့်ရှုပြီးနောက်၊ လက်ဆစ်တာ ပီတိဖြစ်သွားသည်။ ရုပ်ရှင်အပေါ် သူ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဒစ္စနေက ကြားသိသောအခါ၊ မေးသည်။ အမေရိကန်ပရိသတ်အတွက် ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေးကို မိတ်ဆက်ပေးရန် လက်ဆစ်တာ စိတ်ပါဝင်စားသလားဟူ၏။ ထိုအခါ လက်ဆစ်တာက အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းပြန်ရန် စီမံထုတ်လုပ်သူအဖြစ် တာဝန်ခံလိုက်လေသည်။ ထို့နောက်တွင်ကား၊ အခြားများစွာသော သူများလည်း ပရောဂျက်၌ ပါဝင်လာသည်, အလှပဂေးနှင့် သားရဲကောင် (Beauty and the Beast) တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ ကိယာ့ ဝိုက် နှင့် အာလာဒင် (Aladdin) တွဲဖက်ထုတ်လုပ်သူ ဒေါ်နယ် ဝ. အားနက် ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေး၏ ဒါရိုက်တာနှင့် ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် အသီးသီးပါဝင်လာကြသည်။ ဇာတ်ညွန်းခွဲသူ စင်ဒီ ဒေးဗစ် ဟူးဝစ်နှင့် ဒေါ်နယ် အိတ်ချ်. ဟူးဝစ်တို့သည် ဇာတ်ကောင်များ၏ ဂျပန်နှုတ်ခမ်းလှုပ်ပုံနှင့် ဒိုင်ယာလော့များ ကိုက်ညီအောင် အင်္ဂလိပ်စကားပြောများကို ပြန်လည်ရေးသားသည်။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာတွင် ဒေဗေး ချေ့ (Daveigh Chase)၊ ဂျေဆင် မာစဒင် (Jason Marsden)၊ ဆူဇန်နီ ပလက်ရှက် (Suzanne Pleshette) (၂၀၀၈ ဇန်နဝါရီတွင် သူမမကွယ်လွန်မီ နောက်ဆုံး ပါဝင်သော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ရုပ်)၊ မိုက်ကယ် ချက်လစ် (Michael Chiklis)၊ လောရင် ဟိုလီ (Lauren Holly)၊ စူစံ အဂန် (Susan Egan)၊ ဒေးဗစ် အော့ဒင် စတိုင်းယား (David Ogden Stiers)နှင့် ဂျွန် ရတ်ဇင်ဘာဂျာ (John Ratzenberger)တို့ ပါဝင်သည်။ Disney.com ၏ ရုပ်ရှင်ကဏ္ဍ လှိမ့်ဆွဲရသော ကြော်ငြာ သေးသေးလေးတွင် ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး အဝေးကို အကန့်အသတ်ဖြင့် ဖော်ပြ ကြော်ငြာသည်။ တရားဝင်ဝက်ဆိုက်၏ ဘေးနေရာကွက်လပ်ကို ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေးအတွက် ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်၊ ရုပ်ရှင်ကို ပရိုမိုးရှင်းရာ၌ ဘတ်ဂျက် နည်းနည်းသာ အသုံးပြုသည်။ ဤသို့ ပြုရခြင်း အကြောင်းကို မခ် ဟဲယာစတန် (Marc Hairston)က ချေပသည်မှာ စတူဒီယို ဂစ်ဘလီ၏ ရုပ်ရှင်နှင့် ဇာတ်ကောင်များကို ရောင်းတမ်းဝင်အောင် ကြော်ငြာရာ၌ မူပိုင်ခွင့်များ အကန့်အသတ် ရှိခြင်းကြောင့်၊ ဈေးကွက်သို့ သင့်လျော်စွာ မတင်ပို့နိုင်ဘဲ၊ ဤသို့ အကျဉ်းရုံးရခြင်းမှာ မျှမျှတတ တုံ့ပြန်မှုပင်ဟု ပြောဆိုသည်။
ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေး၏ အဓိက အပြင်အဆင်ကို ဂျပန် ရှင်တိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ယုံတမ်းပုံပြင်များက အများအပြား လွှမ်းမိုးထားပြီး၊ ဇာတ်ကောင် ချိဟိရိုနှင့် သူမ၏ နာနာဘာဝလောကသို့ သွားသော ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် ခရီးအပေါ် ဗဟိုပြုထားသည်။ ရုပ်ရှင်၏ ပင်တိုင်နေရာမှာ ဂျပန် ရေချိုးရုံ ဖြစ်ကာ၊ ခမိ (နတ်) အပါအဝင် ဂျပန်ယုံတမ်းပုံပြင်များမှ သတ္တဝါဆန်းကြီးများစွာသည် ရေချိုး သုံးသပ်ရန် လာလည်ကြသည်။ နွေနှင့် ဆောင်းယာဉ်စွန်းချိန်၌ ကျေးလက်နေ ရွာသားများသည် သူတို့ဒေသအလိုက် ဆိုင်ရာ ခမိများကို ရှိခိုးကာ၊ ရေချိုးကြွရန် ဖိတ်မံလေ့ ရှိသည့် ရိုးရာဓလေ့ကို မိယဇခိက မှီငြမ်းထားသည်။ ချိဟိရိုလည်း အပင်ခမိနှင့် သတ္တဝါခမိများကို ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ မိယဇခိက ဤသို့ ဆိုသည်။ <quote>
ကျွန်တော့်အဘိုးအဘွားတွေ လက်ထက်တုန်းကဆို၊ ခမိတွေ နေရာအနှံ့မှာ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်၊ သစ်ပင်ထက်မှာ၊ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်ထဲမှာ၊ သတ္တဝါကိုယ်တွင်းမှာ၊ ရေတွင်းမှာ ဘာမဆိုမှာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်တွေက ဒါရှိတယ်လို့ မယုံကြတော့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ နတ်တွေ နေထိုင်နေတာမို့လို့၊ အရာရာတိုင်းကို တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို သဘောကျမိတယ်။ အရာအားလုံးဟာ သက်ရှိပုံစံတမျိုးစီနဲ့မို့ အရာအားလုံးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်ဗျာ။
</quote> သေပြင်သို့ ချိဟိရို၏ သမားရိုးကျသော ဝင်ပေါက်သည် စကောစကအရွယ်တွင် ကြားညပ်နေသော သူမ၏ အခြေအနေကို ဘောင်သတ်ပေးထားသည်။ သဘာဝလွန် အခင်းအကျင်းများတွင် ချိဟိရို၏ လူမှုဆက်ဆံရေးများသည် ဘောင်မဝင် ဖြစ်နေရသည်။ ခမိခကုရှိ (နတ်ဝှက်ခြင်း, Kamikakushi) ဆိုသော စကားလုံးကို တပ်ထားသော ခေါင်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်ရာ ပုံပြင်များသည် ဤ ကြမ်းတမ်းသော လမ်းကြားကလေးမှ အစပြု ပြုံထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ခမိခကုရှိ ဆိုသည်မှာ ဤလူလောကတွင် ဆက်ဆံရေးသေဆုံးခြင်း ဖြစ်ကာ၊ နတ်ဝှက်ထားရာမှ ဤလောကသို့ ပြန်ရောက်လာခြင်းကို လူမှုဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိခြင်း လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် အခင်းအကျင်း တခုမှာ မျက်နှာမဲ့အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်းစားသုံးမိသမျှ မည်သူမဆို၏ အကျင့်စရိုက်ကို လက်ခံပြီး၊ အတုယူတတ်သော ဇာတ်ကောင်ကို ထင်ဟပ်သည်။ ဤ သဘောသဘာဝကြောင့် ရေချိုးအိမ်ထဲ၌ မျက်နှာမဲ့ ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ခြင်း ဖြစ်ပွားရသည်။ ချိဟိရိုက အန်ဆေးလုံး တိုက်ကျွေးလိုက်ပြီးနောက်မှ၊ ၎င်းသည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော မျက်နှာမဲ့ ပြန်ဖြစ်လာသည်။ ရုပ်ရှင်အဆုံးသတ်၌၊ ဇဲနီဘာသည် မျက်နှာမဲ့ကို စောင့်ရှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အခါ၊ မျက်နှာမဲ့သည် ရေချိုးအိမ်မှ မကောင်းသော အကျင့်စရိုက်များ ကူးစက်ခြင်း နောက်တကြိမ် ခံရတော့မည် မဟုတ်ချေ။
ရုပ်ရှင်ကို လူးဝစ်ကာရိုး၏ အဲလစ်ကလေး၏ ဝမ်းဒါးလန်းမှာ စွန့်စားခန်းများ (Alice’s Adventures in Wonderland) နှင့် ကြည့်မှန်ကိုဖြတ်ကာ (Through the Looking Glass) ဇာတ်လမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လာကြသည်။ နှိုင်းယှဉ်ရအောင်လည်း၊ ထူးခြားဆန်းကြယ်လောကထဲ အခြေတည်ထားခြင်း တူခြင်း၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များမှာ ယုတ္တိနှင့် ခိုင်မာမှုတွင် အနှောင့်အယှက်များ ပါနေခြင်း၊ အစားအသောက်များမှာ ပုံပြောင်းစေသော အစွမ်းရှိပြီး၊ ဘာကြောင့် ပြောင်းရသည်ကို ရှင်းပြလေ့မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေးနှင့် နှိုင်းနိုင်သော အခြားဇာတ်လမ်းများတွင်၊ အံ့ဩစရာ မှော်ဆရာအော့ဇ် (The Wonderful Wizard of Oz)နှင့် အခင်းအကျင်းပိုင်းတွင် ပိုတူသည်။
တဖန် ယုဘာဘာသည်လည်း ပီနိုချိအို ရုပ်ရှင်ထဲမှ နည်းပြလူကြီးနှင့် တူညီမှု များစွာရှိပြီး၊ လူသားများကို ဝက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသည့် အာရုံမှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကျွန်း ၌ လူကလေးများကို မြည်းအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသည်နှင့် တူသည်။ နာမည်ရင်းကို ယုဘာဘာ ဖမ်းစားသည့် ပုံစံမှာ ကလေးကို လူကြီးဟု ယူဆသတ်မှတ်ပြီး သတ်လိုက်သည့် ပုံဆောင်ထားသည်။ သူမ၏ ဘဝမှတ်တိုင်ကို ဖြတ်ကျော်ရသည်နှင့် တူပြီး၊ သူမ၏ နဂိုအတိတ်အတိုင်း ပြန်လည်နေထိုင်ရရန်အတွက်၊ ချိဟိရိုသည် စရိုက်အသစ်တမျိုးကို ဖန်တီးမှ ရချေတော့မည်။ (ရှက်ကြောက်နေ၍ မရတော့)
ရိုးရာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အနောက်တိုင်းဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေးအဝေးတွင် ခေတ်မီဂျပန်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ မျိုးဆက်သစ်များ ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် သဟဇာတဖြစ်မှုတို့၌ အငြင်းပွားစရာကောင်းသော မှတ်ချက်ကို ထည့်ထားသည်။ ချိဟိရိုကို လုံမပျိုကလေးအဖြစ် ကိုယ်စားပြုထားသည်ကို တွေ့မြင်ရကာ၊ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အတွေးအခေါ်ပိုင်းသည် စစ်ပြီးခေတ် ဂျပန်ကတည်းက လုံးလုံးလျားလျား ကွာခြားနေလေပြီ။ ရုပ်ရှင်ကို စထွက်သည့် ၂၀၀၁ ခုတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဂျပန်စီးပွားရေး အကျဘက်အပေါ် ပူပန်သောကရောက်နေရသည်တွင် ချိဟိရို၏ သူမအတိတ်ကို ပြန်ရှာဖွေ ပြန်တမ်းတနေသည့်ပုံစံမှာ၊ ဂျပန်၏ အတိတ်ကာလ စံနှုန်းများကို ပြန်လည်ရှာဖွေနေသည်နှင့် တူပြန်သည်။ အင်တာဗျူး တခု၌၊ ပြန်လည်မရနိုင်တော့သော ခေတ်ဟောင်းဂျပန်နှင့် ပတ်သက်ကာ လွမ်းဆွတ်မိကြောင်းမိယဇခိက မှတ်ချက် ပြုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း၊ ရုပ်ရှင်သည် ဂျပန်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအပေါ် လောဘကြီးခြင်းနှင့် အနောက်တိုင်း ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စူးစမ်းပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု တစိတ်တပိုင်း နားလည်ရလေသည်။ ဥပမာ၊ ယုဘာဘာသည် ရေချိုးရုံ တအိမ်လုံးတွင် ဝတ်စားဆင်ယင်ထားသည်မှာ စတိုင်ဖက်ရှင် အကျဆုံးဖြစ်ကာ၊ အနောက်တိုင်း ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုများ ဥရောပစတိုင် မွမ်းမံထားခြင်းနှင့် ပရိဘောဂများကို တွေ့ရသည်။ အလုပ်သမားများ၏ သေးနုတ်သော ဂျပန်စတိုင် ဝတ်စုံများနှင့် နှိုင်းစာလျှင်၊ ယင်းသည် မေဂျီခေတ်နှင့် ၎င်းခေတ်အလွန် ဂျပန်အပေါ် အနောက်တိုင်းအရင်းရှင်ဝါဒ လွှမ်းမိုးလာသည်ကို ကိုယ်စားပြုနေသည်။
↑ Spirited Away (PG)။ British Board of Film Classification (14 August 2003)။ 28 January 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named howe
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named variety
↑ "‘Mononoke’ creator Miyazaki toons up pic"၊ Variety၊ 15 December 1999။ 24 February 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Box Office Worldwide", 22 December 2019
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝိဉာဉ်လွင့်ပြေး_အဝေး&oldid=726196" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။